ဘယ်လို OUTLOOK ကိုအတွက်ဖိုလ်ဒါကိုဖန်တီးရန် - သဘောတား - 2019
စာသားအပြင်၌သင်တို့၏က MS စကားလုံးစာရွက်စာတမ်းကိုလည်းကိန်းဂဏန်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ဂရပ်ဖစ်ပါရှိသည် အကယ်. အချို့သောကိစ္စများတွင်ပါကအုပ်စုတစုကသူတို့ကိုရန်လိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကတစ်ဦးချင်းတစ်ဦးချင်းစီအရာဝတ္ထုပေါ်တွင်နှင့်တပြိုင်နက်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောအပေါ်မဟုတ်ပိုမိုလွယ်ကူစွာနဲ့ထိထိရောက်ရောက်အမျိုးမျိုးသောထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်အသီးအသီးကတခြားကပ်လျက်နှစ်ခုကိန်းဂဏန်းများရှိသည်, သင်သည်ထိုသူတို့အကြားအကွာအဝေးအားလျော့မပေးကြောင်းထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ရွှေ့ချင်တယ်။ ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့ဖြစ်၏ကြောင့်အုပ်စုအကြံပြုသို့မဟုတ်နှုတ်ကပတ်တော်၌ကိန်းဂဏန်းများပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုသတင်းအချက်အလက်, ကြှနျုပျတို့ကိုအောက်တွင်ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
1. သင်ကအုပ်စုတစ်စုကိန်းဂဏန်းများချင်သောစာရွက်စာတမ်းကိုဖွင့်။ ဒါဟာအစသင်သာတစ်ဦးအသွင်သဏ္ဌာန်သို့မဟုတ်ဂရပ်ဖစ်ဖိုင်တွေထပ်ထည့်လိုသည့်အတွက်တစ်ဦးအလွတ်စာရွက်စာတမ်း, ရှိနိုင်ပါသည်။
ကနှင့်အတူစစ်ဆင်ရေးဖွင့်ဖို့ကိန်းဂဏန်းများ (အရာဝတ္ထု) ၏မည်သည့်ရက်တွင် 2. ကိုနှိပ်ပြီး (tab ကို "Format ကို") ။ ပေါ်လာသော tab ကိုသွားပါ။
3. ဆင်း Hold "CTRL" နှင့်အုပ်စုဖွဲ့ခံရရန်ပုံစံမျိုးစုံပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ။
ကောင်စီ: မဖြစ်မီပုံခွဲဝေချထားပေးရန်, သင်ကလိုအပ်အတိအကျအဖြစ်သူတို့နေရာယူထားကြသည်ကြောင်းသေချာပါစေ။
အဆိုပါ tab ကိုတွင် 4. "Format ကို" က "စီစဉ်" အုပ်စု, ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အုပ်စု" နှင့်ကို select "အုပ်စု".
5. ္တု (ပုံစံမျိုးစုံသို့မဟုတ်ပုံရိပ်တွေ) အုပ်စုဖွဲ့ပါလိမ့်မည်, သူတို့ကတစ်ဦးဘုံလယ်ပြင်ရပါလိမ့်မယ်, အရာနှင့်အတူကနှင့်ပြောင်းရွေ့တခုမှာနှင့်အထူးသဖြင့်အမျိုးအစားဒြပ်စင်အဘို့ခိုင်လုံသောနေသောသူအပေါင်းတို့သည်အခြားထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးကနေအားလုံးင်, သင်အုပ်စုကိုနှုတ်ကပတ်တော်၌ objects ဘယ်လောက်မှသိခဲ့ရတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌ဖော်ပြထားညွှန်ကြားချက်များကိန်းဂဏန်းများ၏အုပ်စုများအတွက်သာသုံးနိုင်တယ်။ ယင်းရေးဆွဲများ၏အကူအညီဖြင့်လည်းပေါင်းစပ်နှင့်အခြားမည်သည့်ဂရပ်ဖစ်ဒြပ်စင်နိုင်ပါတယ်။ အားလုံး၎င်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေကျွမ်းကျင်, မှန်မှန်ကန်ကန်နှင့်ထိထိရောက်ရောက် Microsoft ကကနေ software ကိုသုံးပါ။
ဗီဒီယို Watch: Microsoft Outlook 2019 - Full Tutorial for Beginners +General Overview (အောက်တိုဘာလ 2019).